Dowlada Tunisia oo ka mamnuucday dalkeeda diyaaradaha shirkadda Emirates
Dawladda Tuniisiya ayaa ka mamnuucday dalkeeda dalkeeda inay diyaaradaha Shirkadda Emirates oo laga leeyahay wadanka Isutagga Imaaraadka Carabta.
Guddi loo xil saaray baaritaanka dhacdadii Bariire oo maanta tagaya deegaankaas
Sagal Radio Services • News Report • August 27, 2017
Wararka ka imaanaya deegaanka Bariire oo ka tirsan degmada Afgooye ayaa sheegaya in Guddi xaqiiq raadin ah oo loo saaray baaritaanka dhacdadii jimcihii lagu dilay dad rayid ah ay ku wajahan yihiin deegaankaas.
Dowladda Soomaaliya oo Guddi u saartay baaritaanka dhacdadii Bariire
Dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqday inay Guddi u saartay dhacdadii shalay ka dhacday deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo lagu laayay 10 ruux oo beeraley ahaa.
ugu danbeeyay howlgalkii Pizza House ee la soo gabagabeeyay
Dowladda Qadar ayaa ciidamadeeda Nabad-ilaalinta ah kala soo baxday xadka u dhexeeya wadamada Jabuuti iyo Eritrea, kadib markii labada wadan ee ku yaalla bariga Africa ay la safteen dalka Sacuudiga.
Soomaaliya oo soo dhoweysay go’aanka Golaha Wasiirada India ee is weydaarsiga maxaabiista
Dawlada Imaaraadka oo dooneysa inay saldhig militari ka dhex furato Somaliland
Dawlada Imaaraadka ayaa si rasmi ah u dooneysa ogolaansho in loo siiyo inay saldhig militari ka dhex furato Somaliland.
Dowladda Soomaaliya oo bilaabeysa hawlgalo Al-Shabaab looga sifeynayo qeybo ka mid ah dalka
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay bilaabeyso howl gallo ka dhan ah Al-Shabaab, sida lagu sheegay War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Sagal Radio Services • News Report • January 22, 2016
Wasiirka Amniga gudaha C/Risaaq Cumar Maxamed ayaa ka hadlay weerarkii xalay lagu qaaday Baarka Liido Sea Food ee Magaalada Muqdisho.
Mahad Salaad “Dowladda Federaalka qeyb kama ahan mushikada ka jirta Gaalkacyo, xalinteeda ayay wadaa”
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad ayaa beeniyay eedeyn ka timid Maamulka Puntland oo ahaa in dagaalka Gaalkacyo ay qeyb ka tahay dowladda Federaalka, isagoo cadeeyay in dowladda aanay qeyb ka aheyn, balse ay qeyb ka tahay xalinta mushkilada ka dhex jirta Puntland iyo Galmudug.
Shaqaalaha dowladda oo ka cabanaya mushaar la’aan heysata muddo afar bilood xiriir ah
Sagal Radio Services • News Report • June 10, 2015
Shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa ku jira marxalad dhaqaale xumo oo aad u daran, iyagoo la’ mushaarkii iyo gunnadii ay xaqqa u lahaayeen muddo afar bilood oo xiriir ah.
C/salaan Hadliye “Wax la aqbali karo ma ahan in Somaliland ay celiso qaxooti Soomaali oo dhulkooda ku soo noqonaya”
Wasiirka Arrimaha Dowladda Soomaaliya C/salaan Hadliye Cumar ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay tallaabadii Somaliland ay ugu diiday in qaxooti Soomaali ah oo ka soo cararay colaada Yemen ka soo degaan Dekeda Berbera, iyadoo dadkaas oo haween iyo caruur ahaa dib loogu celiyay doontii ay saarnaayeen.
Dowlada oo si rasmi ah u shaacisay in shirka wasiirada arrimaha dibada IGAD lagu qabanayo Muqdisho
Afhayeenka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaliya Daa’uud Aweys ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ay ku kulmi doonaan 10-ka bisha Janaayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo wadan Ciidan ay ka joogaan Soomaaliya u diiday wafdi ka socda in ay imadaan wadanka.
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2014
Warbaahinta Dowlada oo soo bandhigtay Sawirka Xasan Xanafi oo Jirkiisa Dhaawacyo ka muuqdaan(Daawo Sawirka)
Warbaahinta ku hadasha afka Dowlada Soomaaliya ayaa soo bandhigtay Sawir la sheegay in uu yahay Wariye Xasan Xanafi Xaaji Xasan oo kamid ahaa Saraakiisha Al-Shabaab kuwooda Warbaahinta u qaabilsan.
Dowladda Soomaaliya oo wada qorshe ay ku soo daad-gureyneyso Soomaalida ku go'doonsan Koofurta
Safaarada Soomaaliya ee Koofurta Sudan ayaa maanta shaaca ka qaaday inay soo daad-gureyneyso Muwaadiniinta Soomaalida ee ku go'doonsan gobolada ay ka socdaan dagaalada, kadib markii cabasho ka soo yeeray Soomaali fara badan oo saameyn ku yeeshay dagaalada u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo Mucaaradka ka soo horjeeda.
DOWLADDA SOOMAALIYA OO BEENISAY INUU KHILAAF KALA DHAXEEYO MAAMULKA JUBBA
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warar la isla dhexmaraye oo ku aadan in maamulka Jubba iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya uu ka dhextaagan yahay khilaaf.